MediaKind သည် NAB Show 2019 တွင်၎င်း၏စကြဝitsာအစုစု၏ပွဲ ဦး ထွက်နှင့်တီဗွီခေတ်သစ်ကိုကြိုဆိုခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » MediaKind NAB ပြရန် 2019 မှာယင်း၏ဠာအစုစု၏ပွဲဦးထွက်နှင့်အတူတီဗီ၏ခေတ်သစ်ကြိုဆို
မတ်လ 18, 2019
MediaKind မှာယင်း၏ဠာအစုစု၏ပွဲဦးထွက်နှင့်အတူတီဗီ၏ခေတ်သစ်ကြိုဆို NAB ပြရန် 2019
MediaKind ယင်း၏ဠာ၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ကျော်ကြားတဲ့နည်းပညာအမြစ်တွယ် optimized နှင့်စားသုံးသူဗဟိုပြုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုညျခှနျအားအစုစုမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိတစ်မူထူးခြားတဲ့ခရီးအပေါ်ဧည့်သည်ကိုလမျးညှနျပါမညျ
၎င်း၏ cloud-based တီဗီပလက်ဖောင်း, MediaFirst အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ် SaaS စွမ်းရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ကုမ္ပဏီ; ယင်း၏၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် IPTVMediaroom ပလက်ဖောင်းနဲ့ပါတ်သက်; လူအပေါင်းတို့-IP ကို, OTT နှင့် UHD / HDR ကိုဖြန့်ဝေဘို့တိုးမြှင့်မှုများ
ဒီဇင်ဘာလ 360 နေရာလုယူသောပူးပေါင်းတိုက်ရိုက်အားကစားအဖြစ်အပျက်၏အပန်းဖြေမှတဆင့်အဖြစ်-a-Service ကိုက၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် 2018 ဒီဂရီစွဲငြိဖွယ်ရာမီဒီယာနည်းပညာကိုတင်ဆက်ဖို့ MediaKind
At NAB ပြရန် 2019 MediaKind တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာနည်းပညာကိုခေါင်းဆောင်သည် MediaKind ဠာ၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအစုစုမှတဆင့်ရှာဖွေတူးဖော်ရေးတစ်ဦးစွန့်စားမှုအပေါ်တဲဧည့်သည် (#SU720) ယူကကတိပြုသည်။ အဆိုပါ MediaKind ဠာ, content တွေကိုပိုင်ရှင်တွေနဲ့မူလဖွထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်စားသုံးသူတောင်းဆိုချက်များနှင့် drive ကိုအတွေ့အကြုံကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအမျိုးမျိုးတွေ့ဆုံရန်ကြောင်းထူးခြားတဲ့, စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတီဗီအော်ပရေတာပေးဆောင်။
အိန်ဂျယ် Ruiz, CEO ဖြစ်သူ MediaKind, says: "ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ NAB ပြရန် MediaKind အဖြစ်။ ကျနော်တို့ MediaKind ဠာအစုစုကိုအပြည့်အဝနယ်ပယ်သရုပ်ပြဖို့မျှော်လင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တီထွင်မှုများနှင့်မိတ်ဖက် 360 ၌အကြှနျုပျတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုမှတဆင့်ကြည့်ရှုအထူးသဖြင့်စွဲငြိဖွယ်ရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအတွက်စားသုံးသူတောင်းဆိုချက်များကိုတုံ့ပြန်ပုံကိုပြသထားပါသည်O ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ။ ကျနော်တို့လျှင်မြန်စွာမိုဘိုင်း-ပထမဦးဆုံးလောကသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နေရာတိုင်း, လူတိုင်းအတွက်အရည်အသွေးမြင့် immersive မီဒီယာအတွေ့အကြုံများပို့ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့အလားအလာရောက်ရှိရန်ကူညီပေးခြင်းမှကျူးလွန်နေကြတယ်။ "
အဆိုပါ MediaKind ဠာ၏ဗဟိုမှာစားသုံးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းအရာသတ်မှတ်ထားသောမီဒီယာ Workflows အဖြစ်အစစ်အမှန်လောကရှိစားသုံးသူများနှင့်မန်နီးဖက်စ်သည်အပ်သည်ကိုမည်သို့နဲ့တိကျတဲ့လမ်းကြောင်း addressing, ဝဠာငါးခုသတ်မှတ်ဧရိယာများဖြတ်ပြီးအသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ဆန္ဒပြပွဲများကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်:
Orion - immersive နဲ့ဆွဲဆောင်မှုစားသုံးသူအတွေ့အကြုံများကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ၏တိုးတဆင့်အကြောင်းအရာ Discovery, လျာထားသော Advertising ကြော်ငြာ, အကြောင်းအရာငြ့်အရေးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးနဲ့ Actions ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအဆုံးမှအဆုံးသို့ analytics မှတဆင့်။ စားသုံးသူ applications များဖြတ်ပြီးအဖြစ်-a-ဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ပို့
Pictor - အကြောင်းအရာမဆို screen ပေါ်မှာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးမှာမည်သည့် device ကိုရရှိနိုင်ကြောင်းကိုသေချာနေတုန်းတစ်ခုလုံးကို AV စနစ်ပိုက်ကိုဖြတ်ပြီး Catch Up ကို & တိမ်တိုက် DVR နဲ့စစ်မှန်တဲ့ optimization ဖွင့်အကောင်းဆုံးသိုလှောင်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေ
အာကုလ - ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကို OTT, စစ်ဆင်ရေးအကျိုးရှိစွာ headends နှင့် ATSC 3.0 ဆိုပို့အားလုံး screen များအတွက်ထိရောက်, အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအပြောင်းအလဲနဲ့,
cygnus - အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာသေချာသက်ဆိုင်သောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် Cloud ဖြန့်ကျက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, အကူအညီပေးခြင်းနှင့်မူလတန်းဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးလုံလုံခြုံခြုံကိုအပ်နေသည်
Vegas - အဆိုပါ MediaKind ဠာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုချောမွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးသေချာအဖြစ်တန်ဖိုး '' အဖြစ်-a-Service ကို '' မော်ဒယ်အတွက်နေသူများကဖန်တီးပုံကိုသရုပ်ပြ။
တဲမှဧည့်သည်များကြော်ငြာနှင့်ဖြန့်ဖြူးအခွင့်အရေးများအတွက် MediaKind ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်တီထွင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည် optimized အဆုံးမှအဆုံးသို့မီဒီယာပေးပို့အတွက်မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု; All-IP ကို, OTT နှင့် UHD / HDR ကိုပေးပို့အသစ်တိုးတက်လာ; နှင့်၎င်း၏ SaaS စွမ်းရည် Linear အတွင်းမကြာသေးခင်ကတိုးတက်မှုတွေကတဆင့်နှင့်ဝယ်လိုအားအပြောင်းအလဲနဲ့, cloud-based တီဗီပလက်ဖောင်း, MediaFirst, တွင်နှင့် IPTV Mediaroom ပလက်ဖောင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်း Deutsche Telekom, TiledMedia နှင့် Magnum ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အပါအဝင်ကုမ္ပဏီများသည်ဒီဇင်ဘာလ6အတွက်ဂျာမနီမှာနေတဲ့ဘတ်စကက်ဘောပွဲစဉ်ကာလအတွင်းကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Multi-ရုပ်သံလိုင်း 360K 2018 ဒီဂရီတိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ် enable မြင်သော multi-မိတ်ဖက်, concept ကိုသရုပ်ပြ၏ပူးပေါင်းသက်သေပြ, ထပ်ဖွလိမ့်မယ် အမှန်တကယ်ကမ္ဘာစားသုံးသူတစ်ဦးပရိသတ်ကိုရန်။
MediaKind နောက်ထပ်တစ်လျှောက်လုံးစျေးကွက်-ဦးဆောင်သည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်စပီကာများနှင့် panel ကိုအစည်းအဝေးများတစ်စီးရီးမှတဆင့်၎င်း၏အတွေးခေါင်းဆောင်မှုကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန်:
စပီကာ: အိန်ဂျယ် Ruiz စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်တစ်ဦးက C-Suite အဆင့် panel ကိုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါလိမ့်မယ်
7 အကြားတနင်္ဂနွေဧပြီ 13: 00 - 17: 00
7 မှာတနင်္ဂနွေဧပြီ 10: 40 - 12: 00
Demand ကိုတွင်ရန် Linear ကနေ OTT စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပေါ်နေသော
စပီကာ: Meir Lehrer
9 မှာအင်္ဂါနေ့ဧပြီလ 9: 00- 9: 20
Actionable Insights နှင့်မီဒီယာပလက်ဖောင်း analytics နောက်ကွယ်မှစစ်မှန်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်
စပီကာ: Alessandro Scibilia
9 မှာအင်္ဂါနေ့ဧပြီလ 15: 40-16: 00
တူညီသည့်အမီဒီယာလျှောက်လွှာတဆင့်နိမ့် latency တိုက်ရိုက်မီဒီယာအတွေ့အကြုံများပေးအပ်
စပီကာ: ရစ်ချတ် Mansfield
10 မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဧပြီလ 15: 20 - 15: 40
တိုက်ရိုက် 360° ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေ
စပီကာ: Olie Baumann
11 မှာကြာသပတေးနေ့ဧပြီလ 11: 20 - 11: 40
destination 5G ပြဇာတ်ရုံ
5G နှင့်မီဒီယာ: စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများဖန်တီးကယ်နှုတ်ရန်အစွမ်းထက်, ထူးခြားတဲ့ပေါင်းစပ်
စပီကာ: Arun Bhikshesvaran
8 မှာတနင်္လာနေ့ဧပြီလ 11: 30 - 12: 00
တစ်ဦး 5G ကမ်ဘာပျေါတှငျနယူးဆက်ဆံရေး: Frenemies ကျော်လွန်
နာယက: Gowton Achaibar
9 မှာအင်္ဂါနေ့ဧပြီလ 13: 00 - 13: 30
အဆိုပါဂိမ်းကိုစတင်ပါစို့: 4G ကျော် 5K အတွက်အမေရိကန်ပွင့်လင်း Streaming
စပီကာ: Lisa ကို Aussieker
9 မှာအင်္ဂါနေ့ဧပြီလ 14: 00 - 14: 30
10 မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဧပြီလ 16: 00 - 16: 30
အသံလွှင့် panel ကိုအတွက် SRT
10 pm မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဧပြီလ 10.40
all-IP ကိုအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ - ရီးရဲလ်ကမ္ဘာ့ဖလားဖြန့်ကျက်
စပီကာ: မဿဲ Goldman
8 မှာတနင်္လာနေ့ဧပြီလ 14: 00 -15: 00
မီဒီယာ Delivery မှတစ်ဦးကချဉ်းကပ်မှုအသစ်: အိုင်ပီတိမ်တိုက်၏ဂုဏ်တော်ကိုပိုကျ
စပီကာ: Arnaud caron
10 မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဧပြီလ 17: 00 - 17: 30
ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် MediaKind သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး NAB ပြရန် 2019 က်ဘ်ဆိုက် ဒီမှာ.
MediaKind မှာအကြောင်း NAB ပြရန်
At NAB ပြရန် 2019, MediaKind (#SU720) ကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်နောက်မျိုးဆက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၎င်း၏အစုစုနှင့်အတူအသစ်နှင့်ပြောင်းလဲနေသော Workflows မှပြောင်းရွှေ့ဖို့အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖွင့်ဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအ MediaKind ဠာ, စက်မှုလုပ်ငန်းကျော်ကြားတဲ့အနံနှင့်အတိမ်အနက်ကိုနှင့်အတူအဖြေတစ်ခုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအစုစုကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ စားသုံးသူရွေးချယ်မှုများကဝိုင်းရံယနေ့မီဒီယာစကွဝဠာ၏အလယ်ဗဟိုမှာခိုင်မြဲစွာ positioned ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့, ထို MediaKind ဠာ, content တွေကိုပိုင်ရှင်တွေ & originator များသည်ဖွင့်, ကြင်နာအတွက်တုံ့ပြန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ထူးခြားတဲ့, စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတီဗီအော်ပရေတာဝန်ဆောင်မှုပေးပေးဆောင်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာ။
ကျနော်တို့ MediaKind, မီဒီယာနည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက Equity အပေါင်းအဖေါ်များအကြားဖက်စပ်အဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးများမှာ Ericsson က။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်စွဲငြိဖွယ်ရာမီဒီယာအတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရှာဖွေနေဝန်ဆောင်မှုပေး, အော်ပရေတာ, အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ထုတ်လွှင့်သူတို့တွင်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလကြာရှည်စက်မှုလုပ်ငန်းအမွေအနှစ်များအပေါ်ဆွဲ, ငါတို့နေရာတိုင်းမှာလူတိုင်းအဘို့, လာမယ့်မျိုးဆက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand မိုဘိုင်းနှင့် multiscreen မီဒီယာအတွေ့အကြုံများမောင်းနှင်နေကြသည်။ မီဒီယာဖြေရှင်းချက်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဆုံးမှအဆုံးသို့အစုစုကိုအလှူငွေများနှင့်တိုက်ရိုက်-to-စားသုံးသူကိုဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုဖြန့်ဖြူးဘို့သူဟာ Emmy ဆုရဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည်; ကြော်ငြာနဲ့ content personalization ဖြေရှင်းချက်; မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာမိုဃ်းတိမ် DVR; နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေပလက်ဖောင်း။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး: www.mediakind.com.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး 2019-03-18
ယခင်: NVP မြက်ချိုင့်ထဲကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Solutions နှင့်အတူ 4K UHD နှင့် HDR များအတွက် OB ရေယာဉ်စုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
နောက်တစ်ခု: GB ကို Labs က NAB 2019 မှာမောရှေပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းကဆော့ဖ်ဝဲကိုမိတ်ဆက်